Uyicwangcisa njani i-Laptop yakho yoQhagamshelo lweDesktop ekude
NgeWindows Vista, kulula ngokumangalisayo ukuseta inqaku leDesktop ekude ukuze ukwazi ukusebenza phakathi kweelaptop kunye neekhompyuter zekhompyuter. Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka usebenzise i-Remote Desktop kuphela kwindawo ekhuselekileyo- yithi, kwinethiwekhi yendawo hayi kwi-Intanethi.
Cwangcisa iPC yeDesktop ekude
Ungaqwalasela nayiphi na idesktop okanye ikhomputha yekhomputha ukufikelela kude; Nokuba yeyiphi na indlela isebenza kakuhle.
Khetha iPhaneli yokuLawula kwimenyu yokuqala, kwaye uvule iNkqubo yoLawulo lwePhaneli.
Kuluhlu lwemisebenzi kwicala lasekhohlo lefestile, khetha Useto olukude.
Ukuba ibhokisi yencoko yababini yoLawulo lweAkhawunti (UAC) iyavela, cofa iqhosha uQhubeka.
Kwibhokisi yencoko yababini beNkqubo yeeNkqubo zeNkqubo, kwithebhu ekude kwindawo yeDesktop ekude, khetha into enombhalo Vumela Unxibelelwano kwiiKhompyuter eziSebenzayo nayiphi na inguqulelo yeDesktop ekude.
Cofa ku-Kulungile, kwaye uvale iwindow yePhaneli yokuLawula.
Yiyo leyo. Ikhompyuter ngoku ivulekile ekwabelaneni ngedesktop yayo ukude nenye ikhompyuter kwinethiwekhi.
Yenza okwahlukileyo kwiWindows Firewall
Ukuze i-Remote Desktop isebenze, kuya kufuneka wenze okhethiweyo kwiWindows Firewall.
Khetha iPhaneli yokuLawula kwimenyu yokuQala, kwaye uvule iPhaneli yokuLawula iWindows Firewall icon.
KwiWindows Firewall iwindow, cofa kwikhonkco elithi Guqula Useto.
yintoni ongayithathiyo nge-verapamil
Cofa iqhosha lokuQhubeka xa ukhuthazwa sisilumkiso soLawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi.
Kwibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yeWindows Firewall, cofa kwithebhu yokuNgafani.
Skrolela kuluhlu ukufumana into ebizwa ngokuba yi-Remote Desktop, kwaye ubeke uphawu lokutshekisha ngaloo nto.
Cofa iqhosha le-OK, kwaye uvale iWindows Firewall kunye nePaneli yokuLawula windows.
Into onokuyenza ngeDesktop ekude
Xa i-desktop ekude isetiwe kwaye ixhunyiwe, into oyibonayo kwiscreen se-laptop yakho ngumboniso wenye ikhompyutha kwinethiwekhi. Ukuhambisa imouse kwiLaptop yakho kushukumisa imouse kwenye ikhompyuter, kunye neseti yebhodi yezitshixo. Kunjengokuba uhleli kule khompyuter, xa usebenza izinto kude nendawo ekude.
Idesktop ekude inokuboniswa kwiscreen esigcweleyo okanye kwiwindow. Kwimowudi yeScreen esigcweleyo, umtya ubonakala ngaphezulu kwescreen kwaye usebenza njengolawulo lwefestile. Kwimowudi ye Window, i-desktop ekude ibonakala kwiwindow ekwisikrini sekhompyuter yakho.
Ngokudabukisayo, awukwazi ukukopa iifayile kunye neefolda phakathi kwenkqubo ekude kunye nekhompyuter yakho ngokurhuqela izinto ngaphakathi nangaphandle kwifestile yedesktop ekude. Unxibelelwano lweDesktop ekude luninzi lolawulo kunye nenqaku lokufikelela kunokusetyenziswa kwefayile.
Imiphumo emibi yeepilisi zamanzi
carprofen for izinja itshathi idosi
lungelelanisa iziphumo ebezingalindelekanga
nini ukuthatha i-anastrozole kunye ne testosterone